Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Caicedo, Militao, Winks, Gonzalez, Dembele, Buendia, Kenny
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Caicedo, Militao, Winks, Gonzalez, Dembele, Buendia, Kenny
January 12, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Arsenal oo xiiseyneysa saxiixa Brighton 24 jirka qadka dhexe ee reer Mali Yves Bissouma, inkastoo ay u badan tahay inuu u dhaqaaqo xagaagan. (Football.london)
Chelsea iyo Manchester United ayaa ka mid ahaa kooxo badan oo Premier League ah oo xiiseynayay 19 jirka Caicedo, kaasoo ay u badan tahay inuu amaah ku bixiyo Seagulls. (Dailymail)
Tottenham ayaa soo qaadan karta 22-jirka reer Brazil ee daafaca ka ciyaara Eder Militao – oo ay doonayaan kooxaha Roma, AC Milan iyo Inter qaab amaah ay kaga soo qaadaneyso Real Madrid iyadoo ay u furan tahay inay si joogto ah uga dhigto heshiiska. (Corriere dello Sport)
Kooxda Jose Mourinho ee Spurs ayaa kula biirtay kooxaha Leeds iyo Juventus baacsiga loogu jiro ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda Stuttgart Nicolas Gonzalez, oo 22 jir ah, iyadoo xiddiga reer Argentina uu diirada u saaran yahay suuqa xagaaga. (Theathletic)
Waxaa sidoo kale jiri kara dhaq dhaqaaq dhanka kale ah ee Spurs, iyadoo Valencia ay xiiseyneyso inay amaah kula soo wareegto 24 jirka qadka dhexe ee reer England Harry Winks. (Football.london)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Faransiiska ee ku guuleystay Koobka Adduunka Steven N’Zonzi ayaa laga yaabaa inuu amaahdiisa ku joogo Rennes la soo gaabiyo, iyadoo Arsenal iyo Everton lala xiriirinayo 32 jirka reer Roma . (Footmercato)
Weeraryahanka reer France ee kooxda Lyon Moussa Dembele ayaa ku sii dhawaanaya ku biirista kooxda Atletico Madrid ka dib markii uu hore u diiday fursad uu ugu dhaqaaqi lahaa West Ham. (Sky Sports)
Dembele, oo 24 jir ah, ayaa marka hore amaah ugu biiraya kooxda ka dhisan La Liga, isagoo fursad u leh inuu ku iibsado 29.6 milyan oo ginni. (Goal)
Arsenal ayaan haatan baacsaneynin saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Norwich Emi Buendia ka dib markii kooxda heerka labaad ka dhisan lagu soo waramayo inay 40 milyan ginni dul dhigtay 24 jirka reer Argentina. (Express)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Tiemoue Bakayoko ayaa qarka u saaran inuu si rasmi ah uga dhaqaaqo Stamford Bridge iyadoo 26 jirkaan reer France uu weli sii wato qaab ciyaareedkiisa amaahda ah ee kooxda Napoli. (Dailystar)
Juventus ayaa wadahadalo kula jirta Sassuolo oo ku aadan saxiixa 22 jirka reer Talyaani Gianluca Scamacca, kaasoo haatan amaah ugu ciyaara kooxda ay xafiiltamaan ee Serie A ee Genoa. (Goal)
Xiddiga reer France ee RB Leipzig Dayot Upamecano, oo 22 jir ah, waxaa doonaya Bayern Munich, iyadoo kooxda ka ciyaarta Bundesliga ay hada kula biirtay kooxaha Chelsea iyo Manchester United raacdada loogu jiro daafaca. (Marca)